I-Multi-Legit Modern Warfare Hack ats Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Imilenze emininzi Umnxeba woXanduva: Imfazwe yangoku yeHack Hack
Imfazwe yala maxesha ekugqibeleni inokufikelelwa njengesigebenga sokwenyani sisebenzisa iMigangatho emininzi!
Jonga ukuba yeyiphi i-buzz emalunga nayo kwaye uzame isixhobo ngokwakho-Thenga i-1-Day Product Key namhlanje!
Ukuba usuku alonelanga, unokuhlala ixesha elide-Thenga isitshixo seMveliso yeVeki e-1 namhlanje!
Yiba lelinye lawona malungu azinikeleyo afunyenwe kwiiMulti-Legit-Thenga isiXhobo seNyanga esi-1 seMveliso namhlanje!
Imfazwe yala maxesha yenye yezona zinto zidumileyo zikhutshiweyo zomsebenzi esakha sazibona, kwaye kwaba sengqiqweni ukuphuhlisa iMfazwe yeLizwe leMfazwe yanamhlanje eHack ukuze ithelekise ne-hype. Ukufikelela ekukhohliseni okuza kutshintsha umhlaba wakho!
Umnxeba woXanduva: Ulwazi lweMfazwe yanamhlanje
Ukufezekisa kwabo basebenzisa Windows 10 okanye bhetele, le yiHack War War Hack oza kuyonwabela. Ngelixa abanye ababoneleli belibala malunga "nenyama" yezixhobo zabo kwaye bagxile ekuzameni ukwenza izinto ezininzi ngaphakathi, sinayo yonke into oyifunayo ukuze uphumelele ngelixa udlala umnxeba woXanduva: Imfazwe yanamhlanje ngaphandle kokuncama umgangatho. Nangona i-COD MW Multi-Legit Hack yethu i-HWID itshixiwe, sinikezela ngenkonzo yokuphamba ye-HWID apha eMulti-Legit. Obu buqhetseba bulula kakhulu kwaye abuyi kubabhidisa abo bangakhange badlule kwixa elidlulileyo, uya kuziva ngathi uyindalo!
Isisombululo se-1920x1080 kunye ne-100% ubungakanani besiboniso
Sebenzisa i-Aimbot ye-Modern Warfare kunye ne-Bone Prioritization, i-Adimable Fim ye-FOV, i-Smooth Aiming, iitsheki ezibonakalayo kunye nokunye! Kukwakho nobuninzi beenketho ze-Eemy ESP ongakhetha kuzo, kunye ne-Item ESP kunye ne-2D Radar (Ukususwa kubuyile nako!).
Ulwazi lomdlali (igama / isixhobo / uluhlu olubonakalayo)
Izinto ze-ESP ezineefilitha ezininzi
Iiphalethi ezimibalabala zidityanisiwe
I-Aimbot ene-Smooth kunye ne-FOV enokuqwalaselwa
Iinjongo ezininzi ezikhethiweyo zamathambo
Gcina ukhetho olucwangcisiweyo
Malunga noMnxeba woXanduva: Imfazwe yangoku yeLigit-Legit
Olu luqhatho lwangaphandle olunokusetyenziswa ngelixa usasaza, ke unokuluqhatha lonke ilizwe ukuba ucinge ukuba uluhlobo oluthile lwe "super player". Kuya kufuneka ukhuseleko lwakho lukhubazeke ngelixa usebenzisa ubuqhetseba, kungenjalo iflegi engeyiyo inokungasebenzi kwezi zinto. Njengoko besesitshilo ngaphambili, obu buqhetseba abuzi
nge-HWID spoofer, kodwa ungathenga enye yazo ngokwahlukeneyo kwi-Multi-Legit! Unokukhetha ukusebenzisa abalawuli ngelixa usebenzisa iMfazwe yethu yanamhlanje ukukopela, nangona kuya kufuneka uphinde usebenze amaqhosha usebenzisa isixhobo. Esi sixhobo asinakusetyenziswa kwiscreen esigcweleyo.
Kutheni usebenzisa ukubiza uxanduva: Imfazwe yangoku yeMigangatho emininzi kunabanye ababoneleli?
Ukuba ubusebenzisa ababoneleli abasweleyo lonke eli xesha kwaye ufuna ukufumana into entsha, i-Multi-Legit lolona khetho lufanelekileyo lokujonga. Asinazo kuphela izitshixo zemveliso ezahlukeneyo esinokukhetha kuzo (zikunika ubhetyebhetye), kodwa umgangatho wezixhobo zethu awunakuthelekiswa nanto - abanye abaphuhlisi banokwenza nantoni na ukuba babekho kwindawo yethu! Xa ufuna ukwazi ukuba uchitha imali kwindawo elungileyo kwaye uthenge into ethembekileyo yemfazwe yangoku, iMulti-Legit kuphela konjiniyela onokuthembela kuye. Ngaphezulu koko, zonke iiMfazwe zethu zangoku zeMfazwe azibonakali!
Ukuthintela ingxaki ngelixa udlala umnxeba woXanduva: Imfazwe yanamhlanje phantse ayinakwenzeka, yiyo loo nto ukusebenzisa isixhobo esinjenge-COD MW Multi-Legit Hack yethu kunokuba kubaluleke kakhulu. Imenyu yomdlalo weqonga esiye sayiphuhlisa kuzo zonke izixhobo zethu ayizukuyenza nje ukuba ibe lula ukwenza useto lube lula, kodwa iya kuthintela ukungqubana kwescreen kunye nokwenza kube lula ukulawula! Nokuba ufuna ukwenza ithoni phantsi kwinani lezinto ezinikwe amandla, okanye ufuna ukulungelelanisa isantya seMfazwe yangoku yeAimbot, ukusebenzisa imenyu yethu yomdlalo kuya kukuvumela ukuba wenze konke. Thatha ulawulo ngeMulti-Legit!
A5. Hayi, obu buqhetseba abubandakanyi i-hwid spoofer. Sinikezela nge-hwid spoofer eyahlukileyo ye-COD
Umbuzo 7. Ngaba oku kukopela kusebenza nomlawuli?
Hayi, obu buqhetseba abunakusebenza nomlawuli.
Nokuba udiniwe kukuthembela kwiirandi ukukunceda uphume, okanye ufuna nje ukubona ukuba kunjani "kwelinye icala", ukusebenzisa iMult-Legit Modern Warfare Cheat yakho kuya kukunceda uphumelele ngeendlela ezininzi kunenye.
Ngaba ukulungele ukwenza utshintsho? Thenga isitshixo semveliso namhlanje!
Ilindelwe Lawula kunye ne-COD MW Multi-Legit Hack yethu?